January 28, 2022 - ApannPyay Media
မွေးကတည်းက သွားလေးချောင်းပါလာတဲ့ ကလေးနဲ့ ဘီလူးနက္ခတ် (အယူသီးခြင်းနောက်ကွယ်)
January 28, 2022 by ApannPyay Media
မွေးကတည်းက သွားလေးချောင်းပါလာတဲ့ ကလေးနဲ့ ဘီလူးနက္ခတ် (အယူသီးခြင်းနောက်ကွယ်) ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်ခန့်က ဖြစ်သည်။ တောင်ပေါ်ဒေသ၏ အေးချမ်းသော ရာသီဥတုအရှိန်က အရိုးကွဲမတတ် အေးလှသည်။ မီးလင်းဖိုလေးနဘေးတွင် မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို ရင်ခွင်ပိုက်ပြီး မီးနေသည် ဇနီး၏ အရှေ့၌ ဒူးထောက်ငိုကြွေးနေသော ယောက်ျားတစ်ယောက်။ ဝမ်းထဲက ကျွတ်ကျွတ်ခြင်းပင် နို့ဆာ၍ ငိုနေသော ကလေးငယ်ကို ပိုက်ထားသော လင်ယောက်ျားဖြစ်သူ ကိုထွန်းဝေက ငိုကြွေးရင်း ဇနီးဖြစ်သူကို တောင်းပန်တိုးလျှိုးနေသည်။ ” ခင်မေ ကိုယ်တောင်းပန်ပါတယ် သမီးလေးကို နို့တိုက်ပေးပါကွာ။ သမီးလေးက မင်းရဲ့သမီးလေးပါကွာ ” လက်သည်မိန်းမကြီးနှင့် အနီးအနားက မိန်းမကြီး ၃ ယောက်က ကျွန်ုပ်၏ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်၍ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံလွဲ၍ ဘာမှဝင်မပြောနိုင်ချေ။ ” မွေးကတည်းက သွားလေးချောင်းပါလာတဲ့ ကလေးကို ကျွန်မဘယ်လိုနို့တိုက်ရမလဲ။ ကျွန်မဒီကလေးကို … Read more
မြန်မာ့ရာဇဝင်ထဲက သခွားသီးစားချင်လွန်းလို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဘုရင်နှစ်ပါးအကြောင်း
မြန်မာ့ရာဇဝင်ထဲက သခွားသီးစားချင်လွန်းလို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဘုရင်နှစ်ပါးအကြောင်း ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာ့ သမိုင်းထဲက သခွားသီး စားလို့ ဒုက္ခများ ခဲ့တဲ့ ဘုရင် နှစ်ပါး အကြောင်းကို ဗဟုသုတ အဖြစ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ တစ်ပါး ကတော့ ပုဂံခေတ် က သိန်းခိုမင်း (သက္ကရာဇ် ၂၆၃ မွ ၂၇၉ ခုနှစ် ) ဖြစ်ပါတယ်။ တ စ်နေ့ သိန်းခိုမင်း ဟာ အမဲလိုက်ရင်း နောက်လိုက်နောက်ပါ များနဲ့ လူချင်း ကြဲသြားခဲ့ ပါတယ်။ မောလည်းမော ရေ လည်း အလွန် ငတ်လှ ချိန်မှာ လူသူ မတွေ့ရတဲ့ သခွားခင်း တစ်ခင်းကိုတွေ့ပါတယ်။ ဝမ်းသာ အားရနဲ့ သခွားခင်း ထဲဝင် ကာ သခွားသီး များကို အားရ … Read more
သိသိသာသာ ချက်ချင်းဆိုသလို ဈေးရောင်းကောင်းစေသော ယတြာ
သိသိသာသာ ချက်ချင်းဆိုသလို ဈေးရောင်းကောင်းစေသော ယတြာ ယတြာက တော်တော်လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အလွန်အင်မတန်မှလည်း လွယ်ကူသလောက် ထိရောက်မှု့ ရှိပါတယ်။ ထင်မှတ်မထား လောက်အောင်ကို ထူးခြားမှု့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးသည်များအနေနှင့် (မည့်သည့်ဈေးသည်မဆို) ဤယတြာကို လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ချက်ချင်းကို ထူးထူးခြားခြား သိသိသာသာ လာဘ်ပွင့်ပြီး ရောင်ပန်းဝယ်ပန်း ပွင့်လန်းစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်ဆုံးသတိရ ရမှာက … ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘဆရာ တို့ကို ဦးထိပ်ထားပါ။ နောက် ဆိုင်နေရာအခင်းအကျင်းကို ပိုက်ဆံရှိမှ မဟုတ်ပါဘူး မိမိတတ်နိုင်သလောက်နဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ customer များကိုဆွဲဆောင်ပါ။ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာ ရောင်းချပါ။ ရောင်းသူ ဝယ်သူ အသံတူ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း မိမိဆိုင်လာတဲ့ customer များကို ချိုသာယဉ်ကျေးစွာ ဆက်ဆံပါ။ … Read more
လွယ်ကူ အရိုးရှင်းဆုံး ပဲကြီး နှပ်နည်း
လွယ်ကူ အရိုးရှင်းဆုံး ပဲကြီး နှပ်နည်း လွယ်ကူ အရိုးရှင်းဆုံး ပဲကြီး နှပ်နည်း.. အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်က ဈေးတွေမှာ ပဲကြီးကို အခွံခွာပြီးသားတွေ ရောင်းနေပါပြီ။ လွယ်လွယ်ကူကူ ချက်စားလို့ရတာပေါ့။ ခွာပြီးသား ဝယ်ဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုရင် ပဲကြီးကို တစ်ညကြို ရေစိမ်ရပါတယ်။ မနက်ချက်မယ်ဆို ညကတည်း ရေမြုပ်အောင် စိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပဲကြီးတစ်ဆ ရေ ၃ ဆလောက်နဲ့ စိမ်ပါတယ်။ ပွလာမှာနဲ့ အတော်ဖြစ်အောင်ပါ။ အခွံခွာပြီး ပဲကြီးကို ရေမြှုပ်အောင်ထည့်.. ကြက်သွန်နီ တဥ လေးစိတ်ခြမ်းထည့်.. ကြက်သွန်အဖြူထောင်းထည့်.. နနွင်းထည့်ပါ (ငြုပ်အရောင်လိုချင်ရင် ငြုပ်အရောင်မှုန့်နဲနဲထည့်ပါ).. ခရမ်းချဉ်သီးတလုံး လေးစိတ်ခြမ်းထည့်ပြီး ချက်ပါ.. အဖုံးမအုပ်ပါနဲ့.. ရေခန်းခါနီးမှပဲမနပ်သေးရင် ရေနွေးထပ်ထပ်ထည့်သွားပါ.. မမွှေပါနဲ့နော်.. ပဲနပ်ပ်ခါနီးရင်တော့ ဆား အရသာမှုန့်နဲ့ ဆီ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ထည့်ပါ.. … Read more
မိသားစုပဲ စားယုံမက စီးပွားဖြစ်ပါ လုပ်ရောင်းနိုင်တဲ့ ငါးအသားမှုန့်လုပ်နည်း
မိသားစုပဲ စားယုံမက စီးပွားဖြစ်ပါ လုပ်ရောင်းနိုင်တဲ့ ငါးအသားမှုန့်လုပ်နည်း သဘာဝဟင်းခပ်မှုန့်လေးကိုယ်တိုင်လုပ်ကြမယ်ချစ်တို့ရေ့တကယ်ချိုပါတယ်ဆား၊သကြားဘာဆိုဘာမှမထည့်ပဲငါးနဲ့ကြက်သွန်နီရဲ့သဘာဝအချိုကိုယူထားပါတယ်ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းထဲခပ်ကြည့်တာအဆင်ပြေလို့ဝမ်းသာပီတိ လဲဖြစ်ရတယ် ပြုလုပ်နည်းကလဲလွယ်ကူလို့ချစ်ရတဲ့အိမ်ရှင်မတွေအတွတ်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာနေ့လယ်ခင်းပါ ငါးရွှေငါးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့သဘာဝဟင်းခပ်မှုန့်ပါရှင်ပုံမှန်ချက်နေကျဟင်းတွေအတွတ်ငါးအသားမှုန့်နဲ့ ဟင်းခါးတွေထမင်းကြော်တွေငရုတ်ကောင်းပါတဲ့ဟင်းလျာတွေ အတွတ်ငရုတ်ကောင်းပါဝင်တဲ့ထမင်းကြော်တွေငရုတ်ကောင်းပါတဲ့ဟင်းလျာတွေ အတွတ်ငရုတ်ကောင်းပါဝင်တဲ့သဘာဝငါးအသားမှုန့်ပါရှင်ငါးရွှေငါးကိုသုံးထားပါတယ် အချိုမှုန့်အစားထိုးသုံးမှာမို့ငါးကိုအချိုလေးတဲ့အညှီနံ့ကင်းတဲ့သဘာဝငါးတွေအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ပထမတော့ပလာတူး(ငါးသေတ္တာ)ငါးကိုအသုံးပြုဖို့စဉ်းစားပါတယ် ငါးသေတ္တာငါးကအညှီလဲကင်းသလိုအရမ်းလဲချိုပါတယ်ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ့ငါးတွေကသွေးလေးစေတတ်လို့ငါးရွှေငါးကိုအသုံးပြုထားပါတယ် ဒီငါးရွှေငါးတစ်ကောင်ကို၁၅၀၀၀ပေးရပါတယ်၈၀သါးအကောင်လောက်ရှိပါတယ် အဓိကလတ်ဆတ်ဖို့လိုပါတယ် အနံ့မကောင်းတဲ့ငါးဆိုရင်ညှီနံပြင်းလွန်းပါမယ်ငါးကိုစိတ်ကြိုက်တုံးတစ်လို့ရပါတယ် ပန်းခရေကတော့အကျက်မြန်အောင်လွှာထားပါတယ်ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ပါ ရေနွေးဆူလာရင် ငါးတွေကိုဇကာနဲ့ ထည့်ပေါင်းပါရှင် ပြုပ်လဲရပါတယ် ပေါင်းထားတဲ့ငါးတွေကျက်ပြီဆိုရင်တော့အရိုးနဲ့အရေခွံဖယ်ပြီးအသားတွေကိုချေထားပါ သဘာဝဟင်းခပ်မှုန့်ကိုပိုလို့မှချိုအောင်လို့ကြက်သွန်နီကိုလဲသုံးပါမယ်ကြက်သွန်နီဥကြီးကြီး၁၀လုံးကိုလေးစိပ်ထိုးထားပါ ကြက်သွန်ဖြူဗမာဥ၅ကျပ်သားကိုလဲကြက်သွန်ဖြူတစ်တက်ကို၂ခြမ်းခြမ်းထားပါပြီးရင်တော့အခြောက်ခံပါမယ်ရှင် ဒီနေရာမှာပန်းခရေရှင်းပြချင်တာလေးရှိပါတယ် အခြောက်ခံတာကိုစက်ရှိမှခြောက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးရှင် နေပူပူ မှာအခြောက်ခံလဲရပါတယ်မီးသွေးနဲ့ချက်တဲ့သူဆိုနောက်ဆုံးကျန်တဲ့မီးငွေ့ငွေ့နဲ့ဗန်းကြီးကြီးထဲထည့်တင်ထားလို့လဲရပါတယ် Ovenရှိရင်လဲမီးအားအနည်းဆုံးနဲ့အခြောက်ခံလို့ရပါတယ် အဓိက ကသဘာဝဟင်းခပ်မှုန့်ကိုပြုလုပ်မှာပါမိမိမီးဖိုဆောင်ကအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဘယ်လိုအရာနဲ့ပဲဖစ်ဖြစ်အခြောက်ခံလို့ရပါတယ် အခြောက်ခံစက်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူး နော်ချစ်တို့ရေ့သွေ့နေအောင်ခြောက်ပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီ အခြောက်ခံတဲ့အခါကြက်သွန်နီနဲ့ငါးကတော့အခြောက်မြန်ပါတယ် အစေးဓာတ်ပါတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုတော့အနည်းငယ်စိတ်ရှည်စွာ အခြောက်ခံရပါတယ်ရပြီ အားလုံးခြောက်ပြီ ငါးလဲသွေ့နေအောင်ခြောက်ပြီ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီလဲသွေ့နေအောင်ခြောက်ပါပြီ ဒါဆိုရင်တော့ပန်းခရေတို့ကခြောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ငါး အသားတွေ ကြက်သွန်နီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုမီးအေးအေးနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်လှော်ပါမယ်မီးလုံးဝအေးနေဖို့တော့လိုပါတယ် မီးဘယ်လောက်အေးမလဲဆိုရင်ဘယ်အချိန်ဒယ်အိုးထဲကလှော်နေတာတွေကိုဆုပ်ကိုင်ကိုင် ကိုင်နိုင်လောက်အောင်အေးတဲ့မီးအရှိန်နဲ့လှော်ပါမယ်ဒီလိုလှော်တာကအကြာကြီးသိမ်းမယ့်အရာမို့မှိုမတက်တာပိုသေချာစေတယ် ပြီးတော့အရမ်းပဲမွှေးသွားပါတယ် မွှေးမွှေးလေးဖြစ်သွားတယ် ဒီအဆင့်ကိုကျော်ပြီးခြောက်တာနဲ့တန်းကြိတ်လဲရပါတယ် လှော်လိုက်တော့ပိုကြွပ်ပြီးမွှေးမွှေးလေးဖြစ်သွားတယ် ဒါဆိုရင်တော့ ကြိတ်ပါမယ် ဒီလိုpowderအမှုန့်ဖြစ်သွားတဲ့အထိကြိတ်ရပါမယ်ဒါလေးကတော့အရေးကြီးပါတယ် ညက်ညက်ကလေးပေါင်ဒါမှုန့်လို ပြီးတော့ကြိတ်တဲ့စက်၊ထည့်မယ့်ပန်းကန်လုံး၊ဇွန်း၊မိမိလက်၊စားပွဲ စတာတွေဟာသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့နေရပါမယ်အစိုဓာတ်လုံးဝရှိမနေရပါဘူး … Read more
ဒယ်နီ ၊ ဒယ်ပြာ သုံးသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ
ဒယ်နီ ၊ ဒယ်ပြာ သုံးသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ မိတ်ဆွေကောင်းတို့ အိမ်အများစုမှာ ဒယ်နီ ဒယ်ပြာ ဒယ်ခရမ်း တို့ကို တော်တော်များများ အသုံးပြုကြမှာပါ။အလုံးပေါင်းမနည်း ပျက်လိုက် ဝယ်လိုက်နဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနေကြတဲ့သူတွေရှိသလို ဝယ်ပြီးတာနဲ့ စနစ်တကျ တန်းသုံးတတ်တဲ့ လူတွေလည်း တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကောင်းတွေအတွက် အသုံးတဲ့ စေမယ့် အချက်လေးတွေ ကျွန်တော် ထပ်ထည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ 1️. ဒယ်နီအများစု အားလုံးနီးပါးမှာ မီးဆွဲအား 2000W ရှိပြီး မီးအတိုး အလျော့ လုပ်လို့ ရတာကြောင့် Extension Cord (ကြိုးခွေအဝိုင်းများ)နှင့် လုံး၀ မသုံးသင့်ပါဘူး။ 2️. အခုနောက်ပိုင်း ထွက်သမျှ ဒယ်နီတွေမှာ Auto cut-off … Read more
အိမ်နေရင်း ဝင်ငွေတိုးစေမယ့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် တောင်ပို့မှိုဖောက်နည်း
အိမ်နေရင်း ဝင်ငွေတိုးစေမယ့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် တောင်ပို့မှိုဖောက်နည်း စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေဖို့ တပိုင်တနိုင် တောင်ပို့မှို ဖောက်နည်းလေးကို တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဘာမှမရှိတာမို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး တပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်သလို မြေဧက အနည်းငယ်ရှိသူတွေအတွက်လည်း စီးပွားဖြစ်ထုပ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ မှိုတစ်ပိဿာဈေးဟာလည်း ၁သောင်းကျော်နေတာမို့ မက်လောက်စရာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာက နည်းသိဖို့ပါဘဲ။ သဘာဝနည်းဖြစ်တာကြောင့် ဓာတုဗေဒဆေးဝါး ကင်းတာကြောင့် စားသုံးသူများအန္တရယ် မရှိယုံသာမက အနံအရသာဟာလည်း သဘာဝမှိုကဲ့သို့ စိမ့်ချိုနေစေမှာပါ။ နည်းမှာ ပါဝင်ပစ္စည်း ၃မျိုးသာရှိပြီး မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေရလွယ်ပါတယ်။ ၁။ ခြတောင်ပို့ အတွင်းပိုင်းမှ မြေသား၂၀သားခန့်။ ၂။ ထမင်းဖြူ ၆၅ ကျပ်သား( တစ်ကီလို) ၃။ ရေ၂လီတာ(ရေသန့်ဗူး၂ဘူး) တို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ တောင်ပို့မြေနဲ့ ထမင်းဖြူတို့ကို … Read more
လည်ပင်းကြီးရောဂါကို တန်ဘိုးမကြီးသော ရိုးရာ တိုင်းရင်းဆေးနည်းဖြင့် သက်သာစေတဲ့နည်း
လည်ပင်းကြီးရောဂါကို တန်ဘိုးမကြီးသော ရိုးရာ တိုင်းရင်းဆေးနည်းဖြင့် သက်သာစေတဲ့နည်း လည်ပင်းကြီးရောဂါ.. တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာ ၅ နှစ်ရှိပြီဟုပြောပါသည်။ မန္တလေးမြို့ စိန်ပန်းရပ်မှ ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဆေးလည်း နေ့စဉ်စားနေပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားဖြစ်၍ စစ်ကိုင်း သီတဂူဆေးရုံသို့သွားပြသည်.. ပေးသည့်ဆေးကို နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်စားရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဆေးကလည်း ဈေးမကြီးပါ။ စားခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်။ သိပ်လည်း မထူးခြားအနည်းငယ်ပိုကြီးလာသည်ထင်သည်ဟု ဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့် တိုင်းရင်းဆေးခန်းလာပြရသလဲ မေးကြည့်သောအခါ.. ဆရာ့ဆေးခန်းက ဆေးနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့လို့ဟု ပြောသည်။ ဆရာက လည်ပင်းကြီး မကုဖူးပါဟုပြောသည်။ ပျောက်သူအဒေါ်ကြီးက ကိုယ်တိုင်ပြောသည်။ စစ်ကိုင်းနယ်ဖက်မှ ဖြစ်သည်။ ဒူးနာ၍ မန္တလေးဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် တည်းကုရန် အမျိုးဘုန်းကြီးက ခေါ်ကုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာ့ထံတွင် ကုသရင်း ရောဂါမှာ ဒူးနာဖြစ်သော်လည်း တောရွာများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ကုသလေ့မရှိကြသော … Read more
နိမိတ်ဟူသည် ဘယ်တော့မှ မမှားနိုင်ပါ၊ ကောက်ယူပုံလွဲ၍သာ မှားချင် မှားပါလိမ့်မည်
နိမိတ်ဟူသည် ဘယ်တော့မှ မမှားနိုင်ပါ၊ ကောက်ယူပုံလွဲ၍သာ မှားချင် မှားပါလိမ့်မည် နိမိတ်ဟူသည် ကောင်းမည်၊ ဆိုးမည်၊ ဖြစ်မည်၊ ပျက်မည် စသည်တို့ကို ကြိုတင်သိစေနိုင်သော အကြောင်းအမှတ်၊ လက္ခဏာဟူ၍ မြန်မာအဘိဓာန် အကျဉ်းချုပ်တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ ဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဘရင်က နိမိတ္တ ဟူသော ပါဠိဘာသာမှ ဆင်းသက်လာပြီး ဖြစ်လတ္တံ့သော အနာဂတ်အရေး၏ အကြောင်းကို အရိပ်လက္ခဏာ တင်ကြို ပြနှင့်ခြင်း ဟူ၍ ဖော်ပြသည်။ “ဖြစ်မယ် ဆိုရင်လည်း နိမိတ်က အရင်လာတယ်၊ ပျက်မယ်ဆိုရင်လည်း နိမိတ်က အရင်လာတယ်” လို့ ဆိုသည်။ ဖြစ်မယ့်ပျက်မယ့် ကိစ္စတွေအားလုံးသည် နိမိတ်တစ်ခု၊ (တစ်ခါတစ်လေ တစ်ခုထက်ပိုပြီး) နိမိတ်ပြတတ်ပါသည်။ ရှေ့ပြေး ပုဗ္ဗနိမိတ် လာပြီးမှ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်လာတာဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားပွင့်တော့မယ်ဆိုလျှင် ပုဗ္ဗနိမိတ်များ … Read more
သစ်တံခါးဆရာတော်၏ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍ မင်္ဂလာရှိ လာဘ်ပွင့်အောင်လုပ်နည်း
သစ်တံခါးဆရာတော်၏ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍ မင်္ဂလာရှိ လာဘ်ပွင့်အောင်လုပ်နည်း ကျေးဇူးတော်ရှင်သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရား၏ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍မင်္ဂလာရှိလာဘ်ပွင့်အောင် လုပ်ဆောင် ချက်- (၁) နံနက်အိပ်ယာထသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် မျက်နှာသစ်ကာ သွားတိုက်ပီးပါက ဘုရားသောက်တော်ရေလဲ ဆီမီးပူဇော်ပါ ဘုရားကျောင်းဆောင် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ (၂) ဆွမ်းကပ် / ကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ပါ။ သစ်သီးလှူလည်းရပါတယ်။ (၃) ဂုဏ်တော်တစ်ပါးပွား (သို့မဟုတ်)ကိုးပါးလုံးပွားလည်းရ၊ ပုတီးစိပ်ရင်ပိုကောင်းပါ၏ (၄) ကိုယ်လုပ်သောကုသိုလ်တွေကို ကိုယ်စောင့်နတ်၊ အိမ်စောင့်နတ် အလုပ်အကိုင် ရုံးကုမ္ပဏီ စက်ရုံတွေ ဆိုင်တွေမှာ စောင့်သော နတ်မြတ်နတ်ကောင်းအား အမျှပေးဝေပါ။ သစ်တံခါးဆရာတော် အစိမ်းစာအုပ်မေတ္တာဝေနည်းကိုဘဲ စဆုံး မေတ္တာပို့ပါတယ် ပြီးရင် သာဓုခေါ် ကြေးစည် သို့မဟုတ် ခေါင်းလောင်းလှုပ်အမျှဝေပါ (၅) အိမ်မှာ နံနက်ခင်း စိတ်တိုစရာစိတ်ညစ်စရာ မတွေးဘဲ မပြောဘဲ မဆဲမိ ,မအော်မိ … Read more